Ọnọdụ ala: ihe ọ bụ, njirimara, nhazi na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ihe banyere ala na ala anyi nwere echiche nke Ọnọdụ ala. Ejiri aha ala mara ya. Ọ bụ njirimara nke anyị hụrụ n'elu ala nke bụ akụkụ nke ala ahụ. Ugwu, ugwu, ero, na mbara ala bụ ụdị isi ala 4 anyị hụrụ na mbara ụwa anyị. A maara nhazi ala ndị a site na njirimara atụmatụ mpaghara.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ọdịdị ala bụ, njirimara ya na mkpa ya.
2 Landform na ụdị
3 Nhazi na mkpa nke ọdịdị ala
E nwere ụdị nke isi na obere enyemaka. Obere ala bụ ụdị ejiji ahụ, ọwa mmiri, ndagwurugwu na bekee. Mgbe anyị nyochachara ọdịdị ala, anyị na-ahụ na ha nwere ike ịdị ma mmiri ma n’elu ụwa. Ma ọ bụ na n'okpuru mmiri ugwu ugwu na efere na-guzobere. Na sayensị, a na-amụkwa ụdị ihe enyemaka a n'okpuru mmiri iji mara ọdịdị ala nke oke osimiri.
Nhazi ala bụ njirimara geomorphological unit nke ụwa. Onye ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ na-eweta enyemaka nwere ihe ọ ga-eme n’ụwa niile. Nhazi ala bu otu nke ihe omimi nke uwa na nke gunyere ala nile di iche iche ayi puru ihu na mbara uwa. Ha bụ atụmatụ mpaghara nke nwere ihe dị iche iche na ekele maka nke a, anyị nwere ike ịmata ha site na nyocha.
Landform na ụdị
Ka anyị lee ihe bụ ụdị ụdị ọdịdị ọdịdị dị adị:
Plain: Ọ bụ nnukwu mbara ala woolen nwere obere undulations. Mgbe undulations gafere otu ugwu ọ na-agaghịzi ewere dị ka a larịị. Nnukwu ala na ahịhịa pụrụ iche na anụmanụ.
Ugwu ugwu: ha bu ugwu ugwu jikoro ibe ya. Ha na - etolite usoro okike n’otu n’otu nke nwere agwa ndị na - eme ka mmepe nke ndụ kwekọọ na ya.
Montana: mgbe anyị hụrụ na mbara ala gbagoro ihe karịrị 700 mita site na ntọala ya, a na-ahụta ya ugwu.
Ugwu: ha bu oke ugwu di elu ma daba na elu ugwu nke ala. Ọ na-enwekarị ugwu dị larịị ma na-asọ asọ. Ọ bụrụ na mkpọda ahụ adịghị nke kpọdara akpọda, ọ bụghị ugwu.
Agwaetiti: Ha bụ otu agwaetiti ndị dị ibe ha nso. O nwekwara oke kachasị anya nke nwere ike ịdị n'etiti agwaetiti na agwaetiti ka ha wee ghọọ agwaetiti n'ozuzu ya.
Baị: ọ bụ ọnụ ụzọ nke oké osimiri n'ụsọ osimiri. Enwere mpaghara nke mbara ala ebe ọnụ ụzọ oké osimiri pụtara karịa karịa ndị ọzọ. Ọfọn ntinye nke a nke oke osimiri nwere ike ibute site na ụzọ ọpụpụ nke ala dị n'akụkụ oke osimiri ma ọ bụ na ntụgharị.
Delta: Ọ bụ agwaetiti dị n'ọnụ mmiri n'ihi nchịkọta sedimenti. Usoro ọmụmụ ihe, ọkachasị osimiri, na-ebu nsị yana mmiri ahụ. Ọ bụ mgbe ahụ mgbe elu na mkpọda na-ebelata ma a na-edebe sedimenti na-akpụ obere agwaetiti ndị a anyị maara dịka Delta.
Ọzara: Ọ bụ ala kpọrọ nkụ nke enweghị ahịhịa n'ihi enweghị mmiri ozuzo na oke mbuze.
Estero: ọ bụ ala mmiri na-adịghị nke jupụtara na mmiri ozuzo. Nọmalị a ala na-kwajuru na organic okwu na nwere a nnukwu ego nke mmiri. N'oge udu mmiri, ala ndị a na-agbawa n'ihi enweghị mmiri.
Udo: ọ bụ ọnụ mmiri. Enwere morphologies dị iche iche iji kọwaa estuaries dabere na mmiri mmiri na-asọ. Osimiri ndị sara mbara nke ukwuu nwere nnukwu estuaries. Egwu ndị a na-abụkarị ọgaranya na-edozi ahụ, na-eme ka ha bụrụ ihe magburu onwe ha maka ụdị azụ azụ.
Agwaetiti: Ọ bụ otu ibé ala nke mmiri gbara ya gburugburu. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị akụkụ ya ka mmiri anaghị agba ya gburugburu, a na-ewere ya dịka peninshula.
Lagos: ọ bụ a oyi akwa nke mmiri na-agbanwe omimi. Ha na-enwekarị mmiri puru iche dabere n’okpuru ọchịchị mmiri. Ọ bụrụ na mmiri ahụ na-anọchi anya, ọ ga-ekwe omume na a na-emepụta akwa dị iche iche, nke bụ thermocline. Nke a abụghị ihe ọzọ karịa akwa oyi akwa ebe ọnọdụ okpomọkụ na-anọgide na-adịgide adịgide n'elu ala dum.
Oke Osimiri: ọ bụ mbara mmiri nnu nnu sara mbara nke achọtara na-ekpuchi elu ụwa. Ọ bụ ezie na anyị na-akpọ oké osimiri dị iche iche aha ha, ha abụghị ihe ọzọ karịa otu mmiri nke kpuchiri ọtụtụ ụwa.
Plateau: ọ bụ ebe dị larịị n’ime elu ugwu. A gharịrị iburu n'uche na ka ala dị larịị dịrị, a ga-enwerịrị ugwu gharịrịrị kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ dị ka a ga-asị na ọ dị n’elu ugwu. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu
Nhazi na mkpa nke ọdịdị ala
Ka anyị lee ihe usoro nhazi nke atụmatụ mpaghara dị iche iche. Imirikiti n'ime ha na-abụkarị ndị e guzobere site na tectonics efere. Nke a pụtara na mbadamba tectonic nke ụwa mejupụtara ga-agbanwe n'ihi mmiri nke convection na uwe ụwa. Nsogbu a dị n'etiti efere tectonic bụ ihe na-akpata ịdị adị nke ọdịdị ala. Mzeze na nsị bụ usoro nhazi ala nke na-emetụta ọdịdị ala nke na-eweta mgbanwe ma gbanwee ụdị ha.
E kwesịkwara ịgbakwunye na ụfọdụ usoro ndu na ihe ndị ọzọ nwekwara ike imetụta usoro ọdịdị ala. Dịka ọmụmaatụ, ihe dị iche iche dị ndụ na-emetụta ihe omimi nke dunes, coral, algae and reefs. Oge n'aga, Ihe ndi a na - agbanwe agbanwe ka o gbanwee udi nke ihe di iche-iche.
Ka anyị hụ ihe dị mkpa nke ihe ọghọm ala dị. Ọtụtụ n’ime ha dị ezigbo mkpa nye ndị mmadụ, obodo na obodo. Nke a na ihe dị mkpa na-eto eto nke ndị ọrụ mmadụ, ebe ndị njem nlegharị anya, mmasị akụkọ ihe mere eme na mgbochi nke sitere na ụdị nke ihu igwe dị iche iche E nwere ugwu ndị nwere ugwu dị elu nke na-agbanwe ihu igwe gburugburu gburugburu ya kpamkpam. N'ịbụ isi iyi nke akụ ndị sitere n'okike maka ụmụ mmadụ, ọ bụkwa akụ na ụba. E nwere ụfọdụ ebe akụ na ụba bara ụba n'ihi ọnụnọ nke ọdịdị ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe ụdị ala ọdịdị ya bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ọnọdụ ala
Oke Osimiri Cantabrian